समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारको रुप | चितवन पोष्ट
समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारको रुप
समाजवादी देशको कम्युनिस्ट सरकार भोकाको गाँस, बोल्न नसक्नेको बोली, गरिबको धन, नांगाको लुगा, अज्ञानीको ज्ञान, अशिक्षितको शिक्षा, बिरामीको औषधि, असहायको सहारा, निर्धाको बल र किसानको हलो बन्नुपर्छ ।
बिडम्बना नै भनौँ, सरकार ठीक उल्टो कर्म गरिरहेको छ । दुई तिहाइ समर्थन जसको संविधान बदल्ने तागत हुन्छ त्यही सरकार एक व्यक्ति, समूहसँग लाचार र निरीह देखिन्छ । आम जनताको मत मात्र सरकारको आधार होइन रहेछ । यहाँ त सरकार अरु नै बलशालीहरुको काँधमा बोकिएको रहेछ भन्ने अनुभूत भैरहेको छ ।
एक सत्याग्रही सरकारलाई लज्जित बनाउँछ । सत्याग्रहका माग जायज छन् पनि भन्छ सरकार । माग पूरा गर्ने वाचाबन्धन गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । यो समाजवादी कम्युनिस्ट सरकारको निरीहता हो ।
अर्को एक व्यक्ति देश विखण्डनको नारा ओकल्छ, संविधानतः ऊ देशद्रोही ठहर्छ, तर सरकार देशद्रोहीलाई मुद्दासमेत लगाउन सक्दैन ।
प्रायः सडक सडक होइनन्, शत्रुलाई थापिएको धरापजस्ता छन् । बाटोमा खाल्डो खनेर खुला छोडिन्छ, एक सर्वसाधारण खाल्डोमा परेर ज्यान गुमाउँछ, अनि सम्बन्धित पक्षको जवाफ आउँछ– बाटो हेरेर हिँड्नुपथ्र्यो । यहाँ सर्वसाधारण यसरी नै मर्छन्, सरकार मूकदर्शक बनेर हेर्छ । अझै पनि मङ्गालमा ढक्कन नभएको समाचार पढ्नुपर्छ ।
एक बालिका बलात्कारपछि हत्या गरिन्छे, छ महिना बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यसपछि झन् निरन्तर बलात्कारका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त छ, २० रूपैयाँदेखि बीस अरब रूपैयाँसम्मका भ्रष्टाचारका समाचार बग्रेल्ती सुन्न र पढ्नमा आएका छन् । सरकार न भ्रष्टाचार छैन भन्छ, न भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नै गर्न सक्छ । सरकारको यो लाचारीको कारण के हुन सक्छ ! केही मुद्दा ५ दिनमा छिनिन्छन्, केही मुद्दा ५ दशकसम्म पेन्डिङ रहन्छन् ।
सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियानपछि सरकारी विद्यालयको शिक्षा प्रणाली निहालिरहेको छु । चेपाङ समुदायका विद्यालयदेखि सहरभित्रका विद्यालय प्रायः एक–दुईबाहेक सबै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र संरचना जीर्ण देखिन्छ भने संरचना र सम्पत्ति हुने विद्यालयको उचित स्याहार र व्यवस्थापन भएको देखिँदैन । विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् । शिक्षाको स्तर खस्किँदो छ ।
विद्यार्थी संख्या घट्दो क्रममा छ । विद्यार्थी नहुँदा कतिपय विद्यालय बन्द छन् । सरकारी विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएपछि श्रमजीवी वर्ग र किसान सकी–नसकी छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् । पहाडी जिल्लाका विद्यालयमा विद्यालय पुग्न घन्टौँ हिँड्नुपर्ने हुँदा त्यहाँका जनता आवाससहितको विद्यालय बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा राख्छन् ।
समाजवादी देशका कम्युनिस्ट सरकारको छातामुनि ओत लागेका जनता पैसाको अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन् । कति सर्वसाधारण अस्पतालको बिल तिर्न नसकेर अस्पतालमै बन्धक बनाइएका छन् । उपचार खर्च महँगो हुँदै गएको छ । दिनहुँ सामाजिक सञ्जालमा उपचारका लागि सहयोगको याचना गरेका बिरामीका पोस्टहरु पढ्नुपर्छ । उपचारका लागि घरघर चन्दा माग्न हिँड्ने बिरामी पनि दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन् । मेडिकल सिटीभित्र सर्पले टोकेको एक बालक अस्पताल चाहर्दाचाहर्दै उपचार नपाएर हजुरबुबाको काखमै मृत्युवरण गर्छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामी कुर्ने नै बिरामी भएर फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छ ।
कृषिप्रधान देश, कृषिको उर्वरभूमि आज बलिया पाखुरा पलायन हुँदा बाँझिएको छ । सरकार विदेशसँग गरिएको श्रम सम्झौतामै गर्व गर्छ । देशमै भएका किसानले पनि न समयमा सिंचाइको पानी पाउँछन्, न समयमा मल र बीउबिजन । दाना र दूधको मूल्यमा असमानता हुँदा धेरै पशुपालन गरेका कृषक मारमा परेका छन् । दूधको मूल्य नपाउँदा धेरै कृषक कृषि पेसाबाट विस्थापित हुँदै गएका छन् । तरकारीले मूल्य नपाउँदा तरकारी बारीमै ट्रयाक्टर र डोजर लगाएर तरकारी नष्ट गर्न बाध्य छन् किसान भने यता उपभोक्ता त्यही तरकारी चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । सरकार जहाँ देखिनुपर्ने हो त्यहाँ देखिँदैन, किन ?
नागरिकस्तरबाट केही बालगृह र वृद्धाश्रमहरु सञ्चालित छन् र भोका तथा असहायले गाँस र सहारा पाएका छन् । सरकारकै भर पर्नु परेको भए मन्दिरवरिपरि त सुनिन्छ नै, चोकचोकमा भोका र असहायको चीत्कार सुन्नुपथ्र्यो ।
जब नागरिक शिक्षा, उपचारलगायत अन्य आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित हुन्छ भने त्यो सरकार कसरी समाजवादी र कम्युनिस्ट हुन सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक समृद्धिको सुगा रटान बलशाली र ठेकेदारको घेराभित्र बसेर सम्भव छैन । कार्यकर्ताले नेतासँग मात्र सम्बन्ध स्थापित गर्न खोज्ने नेताले कार्यकर्ता मात्र रिझाउने खेल जबसम्म चलिरहन्छ, आमसर्वसाधारणले सरकार भएको महसुस नै गर्न पाउने छैनन् । गरिब, श्रमिक, मजदुर र किसान समाजवादी कम्युनिस्ट भनिएको सरकारद्वारा प्रताडित हुनु विश्वमै लज्जाको विषय हो ।
आधारभूत आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै कस्मेटिक कुरामा रमाउनु राष्ट्रवादी छवि बनाएका प्रधानमन्त्रीको ठूलो भूल हो । चेतना भया !